दिउँसै निजी अस्पतालमा भेटिन्छन् भरतपुर अस्पतालका चिकित्सक, को, कहाँ काम गर्छन् ? – Health Post Nepal
दिउँसै निजी अस्पतालमा भेटिन्छन् भरतपुर अस्पतालका चिकित्सक, को, कहाँ काम गर्छन् ?
२०७६ वैशाख १६ गते ८:१५
भरतपुर अस्पताल मोफसलको सबैभन्दा धेरै प्रसूति गराउने अस्पतालमा गनिन्छ । यहाँ चितवनसहित छिमेकी जिल्लाबाट सुत्केरी हुन आउँछन् । बिरामीको राम्रै हेरचाह हुने विश्वासका साथ मंगलपुरका सुरेन्द्र कँडेलले पनि श्रीमतीलाई सुत्केरी गराउन ५ वैशाखमा भरतपुर अस्पतालमा ल्याए । त्यहाँ उनले दुई दिनसम्म भर्ना गरेर राखे । तर, त्यहाँका चिकित्सकले पेटमा बच्चा उल्टो परेको भन्दै भरतपुर सामुदायिक अस्पतलामा लैजान सुझाब दिए ।
कँडेलले आत्तलिँदै श्रीमतीलाई त्यहाँबाट निकालेर भरतपुर सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना गरे । त्यहाँ भरतपुर अस्पतालमै काम गर्दै आएका डाक्टर सुनीलमणि पोख्रेलले शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माइदिए । तर, उमेर नपुगी जन्म भएका कारण शिशु सघनकक्ष (एनआइसियू)मा राख्नुपर्ने भयो । कँडेल एनआइसियू खोज्दै भरतपुर पुरानो मेडिकल पुगे । त्यहाँ दैनिक १० हजार रूपैयाँ तिरेर ५ दिनसम्म राखे । तर, शिशुको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो ।
सुरुमा बिरामी उपचार गराउन भरतपुर अस्पताल आउने गरे पनि त्यहाँका चिकित्सकले विभिन्न बहाना बनाएर निजीमा लैजाने गरेका छन् । प्रसूति गराउनका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्ति र एनआइसियूसेवा भरतपुर अस्पतालमै उपलब्ध छन् । तर पनि अस्पतलमा बिरामीको चाप देखाई निजी अस्पतालमा बिरामी तान्ने गरेको पाइन्छ ।
‘५ वैशाखमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले नेपाल बन्द घोषणा गरेको दिन, अधिकांश स्थानमा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भएका समाचार मिडियाबाट आइरहेका थिए । सडकमा सार्वजनिक यातायात गुडेका थिएनन् । एम्बुलेन्स पनि पाउन मुस्किल थियो,’ कँडेलले भने, ‘सरकारी अस्पतालले यहाँ उपचार राम्रो हुँदैन भनेपछि भरतपुर सामुदायिकमा ल्याँए । अहिलेसम्म १ लाख ६० हजार खर्च भयो । अप्रेसनको शुल्क मात्र २५ हजार रूपैयाँ लाग्यो । एक सातासम्म आमालाई भरतपुर सामुदायिकमा र बाबुलाई पुरानो मेडिकल कलेजमा राख्नुपर्यो ।’
सरकारी अस्पतालमा १०औँ तहमा काम गर्दै आएका चिकित्सक सुनीलमणि पोख्रेलले शिशु पेटमा उल्टो बसेका कारण अप्रेसन गर्नुपरेको बताए । ‘आमा र बच्चाको स्वास्थ्यअवस्था ठिक छ, शिशुलाई अहिले एनआइसियूमा राख्न पुरानो मेडिकल पठाएका छौँ,’ बुधबार दिउँसो साडे २ बजे भरतपुर सामुदायिकमा बिरामी कुर्न जाँदै गरेका पोख्रेलले भने ।
अहिले सरकारले तोकेको समयपछि चिकित्सक निजीमा पुग्छन् । बिरामीलाई आवश्यक जाँचका लागि सहायकको भरमा छाड्ने गरिन्छ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीलाई अस्पतालपरिसरमै आवास सुविधा दिइएको छ ।
भरतपुर अस्पतलामा सिटी स्क्यानका लागि आवश्यक औषधि लिन त्यहाँका चिकित्सकले प्रगति पोलिक्लिनिक पठाउने गर्छन् । ‘यहाँको फामेर्सीमा सिटी स्क्यान गर्ने औषधि राम्रो हुँदैन । बाहिर किन्दा महँगो पर्छ । प्रगति पोलिक्लिनिकमा जान डाक्टरले भन्नुभयो,’ डाक्टरको पुर्जी देखाउँदै रुद्रपुरबाट उपचार गराउन आएकी लाली ढुंगानाले भनिन्, ‘प्रगति पोलिक्लिनिक कहाँ छ, थाहा छैन । यहाँ लाइन पनि लामो छ ।’
सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा कर्मचारीले निजीमा पनि लगानी गरेका छन् । त्यसकारण सकेसम्म आफ्नो क्लिनिक तथा अस्पतालमा लैजान खोज्छन् । नियमतः सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले अस्पतालमा समय बढी दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी निजीमा व्यस्त भइदिँदा उपचारका लागि आउने बिरामी मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
यहाँस्थित चौबिसकोठीमा रहेका भरतपुर सामुदायिक, नारायणी सामुदायिक अस्पताल, चितवन अस्पताल, रक्षा, ओम, सप्तगण्डकी, शान्ति, पुष्पाञ्जली, मौलाकालिका, एड्भान्स सामुदायिक हस्पिटल, मितेरी पोलिक्लिनिक, कञ्चन मेडिकल, जनसेवा मेडिकललगायत निजी अस्पतालमा सरकारी अस्पतालका चिकित्सक संलग्न छन् । अस्पतालमा धेरैजसो सरकारी चिकित्सककै लगानी छ । निजीमा उनीहरूको विशेषज्ञतासहितको नाम भित्तामा टाँसिएका छन् ।
भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट कृष्णप्रसाद पौडेल स्वयम् मेडिकल रोडमा रहेको भरतपुर सामुदायिक अस्पतालका विशिष्ट हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुन् । अस्पतालमा रहेका १ सय ९ चिकित्सकमध्ये अधिकांशले निजीमा बिरामी जाँच्छन् । उनीहरू बिहान १० बजेभन्दा अघि, दिउँसो खाना खाने समय र ४ बजेपछि निजीमा पुग्छन् । केही चिकित्सक कार्यालय समयमै निजी अस्पतालमा बिरामी जाँच गरिरहेका समेत फेलापर्छन् ।
‘बिरामीको सेवालाई ध्यानमा राखेर तीनवटा फार्मेसी, प्याथोलोजी सेवाहरूमा एमआरआईबाहेक सबै सञ्चालन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कोही बिरामीले छिटो उपचार खोजेको खण्डमा बाहिर जानुपर्यो ।’
अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामीलाई यो वा त्यो बहानामा निजी अस्पतालमा पठाउने गरेको बिरामीहरू बताउँछन् । तर, भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट कृष्णप्रसाद पौडेल भने त्यो मान्न तयार छैनन् । भरतपुर अस्पतालभित्र नभएका सेवाबाहेक अन्य सेवाका लागि निजीमा नपठाउने गरेको उनको दाबी छ । ‘बिरामीको सेवालाई ध्यानमा राखेर तीनवटा फार्मेसी, प्याथोलोजी सेवाहरूमा एमआरआईबाहेक सबै सञ्चालन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कोही बिरामीले छिटो उपचार खोजेको खण्डमा बाहिर जानुपर्यो ।’
सरकारको नीतिका कारण चिकित्सकहरू निजी अस्पतालमा काम गर्न बाध्य हुने गरेको पौडेलले बताए । ‘सरकारले चिकित्सकलाई कुनै सेवा–सुविधा दिएको छैन । तलब ४० हजार छ । विशेषज्ञ भएर निस्कन डेढ करोड रूपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो खर्च सरकारी तलबले धान्दैन,’ उनले भने, ‘डाक्टर निजीमा नजाऊन् भनेर चाहेर पनि हुँदैन ।’ साताको ४० घण्टा चिकित्सकले भरतपुर अस्पतालमा काम गर्ने गरेको उनले बताए ।
कसले कहाँ काम गर्छन् ?
भरतपुर अस्पतालका विभागीय प्रमुखहरू सबैले निजीमा काम गर्र्दै आएका छन् । डा. सुनीलमणि पोख्रेल, बालरोग विशेषज्ञ डा. खेम पौडेल, रेडियोलोजिस्ट डा. केशव पौडेल भरतपुर सामुदायिक अस्पतालमा काम गर्छन् । फिजिसियन डा. विजय पौडेल र स्त्रीरोग विशेषज्ञ श्रीप्रसाद अधिकारी चितवन अस्पताल, फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारी पुष्पाञ्जली हस्पिटल, हार्डजोर्नी विशेषज्ञ डा. श्रवणकुमार थापा, फिजिसियन डा. कालीदास अधिकारीले मौलाकालिका हस्पिटलमा काम गर्दै आएका छन् ।
यस्तै, डा. प्रमोद पौडेलले रक्षा हस्पिटल, डा. प्रकाश खतिवडा ओम अस्पताल, डा. मनोज कंडेलले एड्भान्स सामुदायिक, मानसिकरोग विशेषज्ञ डा. सुनील शाह मितेरी पोलिक्लिनिक, बालरोग विशेषज्ञ नारायणबहादुर थापा नारायणी सामुदायिक, डा. आमोदबहादुर थापा कञ्चन मेडिकल, छालारोग विशेषज्ञ डा. शशि हिराचनले जनसेवा मेडिकलमा काम गर्दै आएका छन् ।